Kufanotaura kwa2009: Tsvaga uye Nharembozha ndiRamangwana Martech Zone
Kufanotaura kwa2009: Kutsvaga uye Nharembozha ndiRamangwana
Mugovera, Mbudzi 8, 2008 Muvhuro, Ndira 14, 2013 Douglas Karr
Zvandinotora kubva pakuratidzwa ndezvekuti kushandisa kweMafoni kunoramba kuchiwedzera kugamuchirwa, kuchipa nzira nyowani yemakambani kuti asvike vatengi vavo. Ndicho chikonzero nei ndine tariro ye kubatanidza kushambadzira nharembozha kunzvimbo dzako dzemasaiti nemishandirapamwe nemafemu akaita seConnective Mobile.
Pamusoro pezvo, iwo masiraidhi anopa humbowo hwakawanda hwekuti kukura kweKutsvaga Kushambadzira (makemikari uye kubhadhara-nekudzvanya) kucharamba kuchiputika mukukura nekuda kwemhedzisiro inogona kuyerwa uye kudzoka kunoshamisa mukudyara. Icho chikonzero chakakonzera kuti ndiende kunzvimbo yangu kuCompendium Blogware, a yemabhizimusi blogging chikuva iyo inopa zvese iko kunyorera uye iyo coaching inodiwa kuti mabhizinesi awane organic organic yekuiswa.
Munhandare yePay Per Click, ndine shamwari mbiri - Pat East ku Hanapin Kushambadzira uye Chris Bross paEvereffect - avo vari kukura nekukurumidza uye vachiita zvine hungwaru uye zvakasanganiswa PPC mishandirapamwe iri kuenderera mberi nekupa yakanaka inodzoka kune yekudyara kune avo vatengi.
Tags: yakabhadharwa kutsvagayakabhadharwa yekutsvaga agencykubhadhara pakukandappcppc agency